Sat, Aug 18, 2018 | 16:42:33 NST
मायोज चाउचाउको कम्पनीलाई उत्पादनमा रोक
रुपन्देही, कात्तिक ३ — मायोज, रुची र साकालाका बुम लगायतका चाउचाउ उत्पादक कम्पनी हिमालयन हाईजेनिक स्न्याक्स एण्ड नुडल्स प्रालिको उत्पादनमा जिल्ला अनुगमन समिति रुपन्देहीले रोक लगाएको छ । सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कम्पनीले आफ्नो उत्पादन गरेका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा अनुगमन समितीले उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाएको हो ।
अव धार्केका होटलमा सय रुपैयामै दाल भात
केशव अधिकारी उज्यालो । धादिङ, कात्तिक ३ — धादिङ जिल्लाको राजमार्ग क्षेत्रका होटलहरुमा अब सादा खाना एक सय रुपैयामै पाइने भएको छ । पटकपटकको अनुगमन र मुल्य समायोजन गर्न जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको आग्रहपछि राजमार्गका होटल सञ्चालकहरु मूल्य घटाउन वाध्य भएका हुन् । यस अघि सादा खानाको एक सय बीस रुपयाँ पर्थ्यो ।
काठमाडौं, कात्तिक ३ — धितोपत्र बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको शेयर मुल्य सुचकांक नेप्से बिहीबार पनि घटेको छ । नेप्से बिहीबार १.१४ अंकले घट्दै ३२८.१८ मा पुगेको छ । कारोवार भएकामा विकास बैंक, होटल र वित्त समुहको परिसुचक बढेको छ ।
सुनचाँदीको भाउ ओरालो लाग्ने क्रम जारी
काठमाडौं, कात्तिक ३ — सुनचाँदीको भाउ आज पनि घटेको छ । सुन आज तोलामा झण्डै ७ सय रुपैया घटेर पचास हजार दुई सय एक रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । बुधबार सुन तोलाको ५० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
सलाइनमा लेदो भेटियो
दिल शिरीष/ उज्यालो । बागलुङ, कार्तिक २ — बागलुङमा रहेको एक मेडिकल हलमा सलाइनको बट्टामा कालो जमेको लेदो फेला परेको छ । जिल्लाको बोहरागाउँमा रहेको रेग्मी मेडिकल हलमा सलाइनको बट्टामा लेदो फेला परेको हो ।
माथिल्लो मनाङका वासिन्दाद्वारा हवाई सेवा बन्द
आश गुरुङ/ उज्यालो । लमजुङ, कार्तिक २ — माथिल्लो मनाङस्थित सात ओटा गाविसका स्थानीय वासिन्दाले मनाङमा हवाई सेवा संचालन गर्न रोक लगाएका छन् । स्थानीयवासीहरुले हवाई सेवा पर्यटक र स्थानीय जनताको अनुकुल संचालन हुन नसकेको भन्दै तत्कालका लागि हवाई सेवा बन्द गराएका हुन् ।
तिहारलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन तीब्र
काठमाडौं, कार्तिक २ — सरकारले तिहारलाई लक्षित गरी बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । दशैंको पूर्णिमा पछि नै अनुगमन शुरु गरिएपनि तिहारमा प्रयोग हुने मिठाई सहितका मसला बढी बिक्री हुने राजधानीका पसलहरुमा वाणिज्य विभाग, उपभोक्तावादी संघसंस्था लगायतको सहभागितामा गत आईतबारदेखि अनुगमन तीव्र पारिएको हो ।
काठमाण्डौं, कात्तिक १ - सुनचाँदीको भाउ आज घटेको छ । सुन आज तोलामा झण्डै सय रुपैया घटेर ५१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि आज तोलामा ५ रुपैयाँ घटेको छ ।
बजार अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका नमूनाको परीक्षणमा ढिलाई
काठमाण्डौं, कात्तिक १ - बजार अनुगमनका क्रममा शंका लागि संकलन गरिएका सयौं नमूनाको परीक्षण गर्ने काममा ढिलाई हुँदा गलत काम गर्नेहरु माथि हुने कारवाही प्रकृयाले गति लिन सकेको छैन । बजार अनुगमनमा संकलन गरिएका नमूना परीक्षणको काम खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्दै आएको छ ।
महानगरभित्रका उत्तेजक होडिङ बोर्ड हटाउन सुरु
काठमाडौं, असोज ३० — काठमाडौं महानगरपालिका विभिन्न ठाउँमा राखिएका उत्तेजक होडिङ बोर्ड सोमबार देखि हटाउन शुरु गरिने भएको छ । गाडी चालकहरुको ध्यान भंग गर्ने खालका उत्तेजक होडिङ बोर्डका कारण दुर्घटना बढेको र ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर पुगेको गुनासो आएपछि काठमाण्डु महानगरपालिकाले यस्ता होडिङ बोर्ड हटाउन लागेको हो ।
विद्युत चोरी गर्ने १९ जना पक्राउ
भरत खड्का/ उज्यालो । उदयपुर, असोज ३० — हुकिङको प्रयोग गरी विद्युत चोरी गर्ने १९ जनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण वेल्टार उपशाखाले आइतबार उदयपुरको सुन्दरपुरबाट पक्राउ गरेको छ । रातको समयमा पोलको तारमा हुकिङ्ग गरी घरमा बत्ति बालिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्राधिकरण, इलाका प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र बेस क्याम्पस बेल्टारको संयुक्त गस्ती टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
निर्माण भएको पाँच महिना नबित्दै भक्तपुरको सडक जीर्ण
काठमाडौं, असोज ३० — एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा रोड कनेक्टिभिटी सेन्टरले बनाएको भक्तपुरको ब्यासी डेकोचाबाट चाँगु नारायण जाने सडक पूरा भएको पाँच महिना पनि नबित्दै धेरै ठाउँमा भत्किएर खाल्डै खाल्डो परेर जीर्ण भएको छ ।
मनोहरा खोलामा बालुवा तस्करको गुण्डाराज
रमेश गिरी/ उज्यालो । भक्तपुर, असोज २९ — बालुवा तस्करहरुले भक्तपुरमा मनोहरा खोला कब्जामा लिएर बालुवा चोरी गर्ने कार्यलाई तीब्र पारेका छन् । स्थानीय प्रशासनले कडाई गरेपछि केही समय रोकिएको बालुवा चोरी दशैँ देखि व्यापक रुपमा बढेको हो ।
तिहारमा फूलको अभाव हुने
काठमाडौं, असोज २८ — यसवर्ष तिहारमा फूलको अभाव हुने भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यसवर्ष पहाडी क्षेत्रमा फूल कम रहेको व्यापारीहरुले बताएका छन् । तराई क्षेत्रमा भने पोहोर जत्तिकै फूल रहेको फ्लोरिकल्चर एशोसियन अफ नेपालले जनाएको छ ।
पसलैपिच्छे फरक फरक मुल्य
आश गुरुङ/ उज्यालो । लमजुङ, असोज २७ — लमजुङ सदरमुकाम वेसीशहरका पसलहरुमा मुल्यसूचि नराखिएको तथा पसलै पिच्छे फरक फरक मूल्यमा सामान विक्री गर्ने गरेको भेटिएको छ । सदरमुकाममा रहेका पसलहरुमा शुक्रवार वाणिज्य विभाग र उपभोक्ता समितिले गरेको बजार अनुगमन तथा नीरिक्षणका क्रममा यस्तो भेटिएको हो ।
पेट्रोलियम पर्दाथमा हुने कालाबजारी रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, असोज २७ — प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पेट्रोलियम पर्दाथमा हुने कालाबजारी रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ । सिहदरबारमा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीसँग शुक्रबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री भटटराइले नियमित आपुर्ति गर्न, कालोबजारी रोक्न र चुहावट कम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
लामिछाने एनआरएन अध्यक्षमा निर्विरोध
काठमाडौं, असोज २७ — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को अध्यक्षमा जिवा लामिछाने निर्विरोध हुनुभएको छ । अध्यक्षका प्रत्यासी देवमान हिराचनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि लामिछाने आगामी दुई वर्षको कार्यकालका लागि निर्विरोध चयन हुनुभएको हो ।
एनआरएनको नयाँ कार्यसमितिका लागि मतदान हुँदै
काठमाडौं, असोज २७ — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आगामी दुई वर्षको कार्यकालका लागि शुक्रबार (आज) मतदान हुँदैछ । शुक्रबार बिहान ९ बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ताका लागि समय तोकिएकोमा दुई जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन ।
आज विश्व गुणस्तर दिवस
काठमाडौं, असोज २७ — ‘अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको विश्वव्यापी विश्वसनीयता’ भन्ने नाराका साथ शुक्रबार (आज) विश्व गुणस्तर दिवस मनाइँदैछ । सन् १९४६ मा लण्डनमा भएको एक अन्तराष्ट्रिय भेलाले गुणस्तरको विकाश गर्ने अन्तराष्ट्रिय सस्थाको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको दिनको सम्झनामा सन् १९७० देखि हरेक वर्षको अक्टोबर १४ मा यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।
एनआरएनका अध्यक्ष पदका प्रत्यासीबीच पत्रकार सम्मेलनमा झण्डै कुटाकुट
काठमाण्डौं, असोज २६ । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनका अध्यक्ष पदका प्रत्यासी देवमान हिराचन र जीवा लामिछानेबीच पत्रकार सम्मेलनमै झडपको अवस्था सिर्जना भएको छ । आ-आपmनो एजेण्डा राख्न होटल सोल्टीमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा हिराचन र लामिछानेले एक अर्काबीच आरोप प्रत्यारोप गरेपछि झडपको अवस्था उत्पन्न भएको हो । विवादका कारण र्समर्थकहरुबीच नै झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
आज एनआरएनको बन्दसत्र
काठमाडौं, असोज २६ — बुधबार देखि राजधानीमा शुरु भएको गैरआवासीय नेपालीहरुको पाँचौ विश्व सम्मेलनमा बिहीबार (आज) बन्दसत्र शुरु हुदैछ । काठमाडौंको होटल सोल्टीमा शुरु हुने बन्द सत्रमा महासचिव, कोषाध्यक्ष र विधान संसोधन प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ ।
बजारमा चाँदीको अभाव
काठमाडौं, असोज २५ — बजारमा चाँदीको अभाव भएको छ । राष्ट्रबैंक तथा नीजि क्षेत्रले समेत केही दिनदेखि चाँदीको आयात नगरेका कारण बजारमा चाँदीको अभाव भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
तेल चोर्ने २ वटा ट्याङ्कर प्रहरीको नियन्त्रणमा
प्रकाश पन्त/उज्यालो, सुर्खेत, असोज २४ । तेल चोर्दै गरेको अवस्थामा सुर्खेत प्रहरीले आज दिउसो २ वटा डिजेल बोकेका ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको भाऊ बढ्यो
काठमाण्डौं, असोज २३ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बिहान बसेको बैठकले सोमवारदेखि लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । पेट्रोलमा प्रति लिटर ३ रुपैंया, डिजेल र मटि्टतेलमा १- १ रुपैंया मूल्य वृद्धि भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।
बाराको नेपाल बोर्डस उद्योग व्यवस्थापनद्वारा बन्द
जयनारायण यादव/उज्यालो, बारा, असोज २२ | गोल्छा अर्गनाइजेशनको स्वामित्वमा रहेको बाराको सिमराको नेपाल बोर्डस उद्योग व्यवस्थापनले बन्द गरेको छ । कच्चा पदार्थको अभावका कारण उद्योग घाटामा गएकोले उद्योग बन्द गर्नु परेको व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ ।
बढी विद्युत चुहावट हुने क्षेत्रमा दोब्बर लोडसेडिङ
भक्तपुर, असोज २२ — नेपाल विद्युत प्राधिकरण भक्तपूर शाखाले बढी विद्युत चुहावट हुने क्षेत्रमा दोब्बर लोडसेडिङ गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले भक्तपूरका चालिस प्रतिशत भन्दा बढी विद्युत चुहावट हुने क्षेत्रमा नियमित भन्दा दोब्बर लोडसेडिङ्ग गर्न थालेको हो ।
मनपरी पैसा असुल्ने धादिङका चारओटा होटलमा प्रशासनको ताला
धादिङ, असोज १५ — धादिङ जिल्लाको धार्केमा सञ्चालित चारओटा होटलमा स्थानीय प्रशासनले आइतबार ताला लगाई दिएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले दिएको निर्देशनको वेवास्ता गर्दै महंङ्गो मुल्यमा खानेकुरा बेच्ने, होटलमा मुल्य सुचि नराख्ने तथा सरसरफाईमा ध्यान नदिने चारओटा होटलमा सार्वजनिक सूचना टाँस गरेर ताला लगाइएको हो ।
सुन चाँदीको भाउ स्थिर
काटमाडौं, असोज १५ — सुन र चाँदीको भाउ स्थिर छ । सुन गत शुक्रबार कै भाउ अर्थात तोलाको ५० हजार तीन सयमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । यस्तै चाँदी पनि शुक्रबारकै भाउ १ हजार १ सय २० रुपैयाँ तोलामा कारोबार भैरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताल नगर्ने सहमतीको वैद्य पक्षको ट्रेड युनियनद्वारा विरोध
काठमाडौं, असोज १४ — औद्योगिक क्षेत्रमा चार बर्षसम्म गैरकानुनी बन्द हड्ताल नगर्ने लगायतका विषयमा नेपालका ट्रेड युनियनहरुबीच शुक्रबार भएको सहमतीको माओवादीको मोहन वैद्य पक्षको नेपाल टे«ड युनियन महासंघले विरोध गरेको छ ।
भक्तपुरमा विद्युत चुहावट ६ प्रतिशतले घट्यो
भक्तपुर, असोज १४ — नेपाल विद्युत प्राधिकरण भक्तपुर शाखाले बिद्युत चुहावट ६ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ । ६ महिना अघिसम्म ५१ प्रतिशत बिद्युत चुहावट भएको शाखा अन्तर्गतका क्षेत्रमा अहिले बिद्युत चुहावट घटेर ४५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सहुलियत पसलमा उपभोक्ताको भीड
काठमाडौं, असोज १४ — दशैँ तिहारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका सहुलियत पसलमा खाद्यान्न खरिद गर्ने उपभोक्ताको भीड लागेको छ । चाडपर्वको समयमा सबै सामानहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध हुने र अरु बजारमा भन्दा सस्तो पर्ने भएकाले यस्ता पसलमा ग्राहकको आकर्षण बढेको हो । नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सात ठाउँमा सुपथ पसल सञ्चालन गरेका छन् । ललितपुरको विशाल बजार, भक्तपुर, जडिबुटी, थापाथली, साल्ट टेड्रिङ कर्पारेसन...
औद्योगिक क्षेत्रमा चार बर्षसम्म बन्द हड्ताल नगर्न ट्रेड युनियनहरु सहमत
काठमाडौं, असोज १३ — औद्योगिक क्षेत्रमा चार बर्षसम्म गैरकानुनी बन्द हड्ताल नगर्न नेपालका ट्रेड युनियनहरुले सहमति जनाएका छन् । चार बर्ष सम्म गैरकानुनी बन्द हड्ताल, ‘नो वर्क नो पे’ र श्रम लचकता अपनाउन सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरुबीच सहमति भएको हो ।
राष्ट्र बैंकद्वारा देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सार्वजनिक
काठमाडौं, असोज १३ — नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०६८/ ६९ को पहिलो महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित मौद्रिक स्थिति अनुसार पहिलो महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ०.२ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय ०.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
बाहुनीडाँडामा बिजुली बल्यो
खोटाङ, असोज १३ — खोटाङको पश्चिमी गाबिस बाहुनीडाँडा–१ मैतुङमा पहिलो पटक बिजुली बलेको छ । दियो र टुकी बत्ती बाल्दै आएका गाउँमा पहिलोपल्ट बिजुली बलेको खुसीयालीमा उपभोक्ताहरुले नाचगान गर्दै संयुक्तरुपमा खुसीयाली मनाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, असोज १३ — प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन साथै कामदार नठगिने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने गरेको ठगीका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपषिदको कार्यालयमा शुक्रवार छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
आईपुगे तिब्बतबाट भेडा च्याङ्ग्रा
काठमाडौं, असोज १३— दशैको लागि चीनको तिब्बतबाट आयात गरिएका भेडा—च्याङ्ग्रा भक्तपुरको सल्लाघारीमा ल्याई पु-याईएको छ । विहिवार दुई हजार र शुक्रवार बिहान ३ हजार गरी पाँच हजार भेंडा च्याङ्गग्रा ल्याईएको हो ।
श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं, असोज १३ — लामो समयदेखि बस्न नसकेको श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक शुक्रवार बस्ने भएको छ । पदाधिकारीबीचको विवाद लगायत विभिन्न कारणले यसअघि बैठक बस्न सकेको थिएन ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको चासो
काठमाडौं, असोज १३— वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने गरेको ठगीका विषयमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रवार सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै हुनुहन्छ ।
सरकारद्वारा श्रम सल्लाहाकार समितिको बैठक आह्वान
माधव दुलाल/उज्यालो, काठमाण्डौं, असोज १२ । सरकारले शुक्रवार दिउँसो केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले श्रम सल्लाहाकार समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो ।
नगरपालिका घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाई
काठमाडौं,असोज १२ — चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् सरकारले घोषणा गरेको नयाँ नगरपालिका बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ । नगरपालिका घोषणा सँगै देखिएका विवाद मिलाउन गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रिपरिषद मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा ढिलाई हुँदा कार्यान्वयन नभएको हो । सरकारले यस वर्षको बजेटमा थप ४१ गाउँ विकास समितिलाई नगरपालिका बनाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा पछि कति ठाउँमा नगरपालिका नबन्ने तथा कति ठाउँमा आसपासका गाउँलाई पनि गाभ्न माग गर्ने क्रम बढेपछि गत साउन ११ गते...